Namboarina indray ny fivoriana: Serivisy MICE ajanona Centara Hotel
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Namboarina indray ny fivoriana: Serivisy MICE ajanona Centara Hotel
Centara Hotels & Resorts, Mpandraharaha fandraisam-bahiny malaza any Thailandy, dia mitondra fisainana vaovao sy fomba vaovao handraisana fivoriana tsara kokoa amin'ny fanombohana ny New Agenda: Meetings Redesigned. Centara dia manolotra foto-kevitra vaovao 'Fampivoarana nohavaozina', manome serivisy MICE tokana ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifa.
Winfried Hancke, talen'ny orinasa Operations Sakafo sy zava-pisotro, Centara Hotels & Resorts, dia nilaza fa ny programa vaovao dia noforonina ho valin'ny valin'ny hevitry ny mpanjifa sy ny faniriana hanararaotra feno ny toerana miavaka sy ny toerana tena lehibe an'ny orinasa.
"Nilaza taminay ny mpanjifanay fa misokatra amin'ny hevitra matotra sy fomba fanavaozana ny fampandraisana anjara ny mpandray anjara amin'ny fivoriana izy ireo ary nihaino izahay," hoy izy. "Matoky izahay fa ny hevitra sy ny enti-miasa ao amin'ny ivon-kevitry ny New Agenda: Fivoriana nohavaozina dia hanome fivoriana mandrisika sy mahomby kokoa ho an'ny mpanjifantsika sy ny fikambananany."
Nandritra ny fotoana lava be, ny fivoriana eny an-toerana dia nanaraka ny fomba fanapahana cookie izay mahatonga ny fivoriana iray hahatsapa fa mitovy amin'ny iray hafa, ka miteraka mpandray anjara mankaleo sy ambany fironana. New Agenda dia natao hampitsaharana izany, miaraka amin'ny serivisy MICE tokana sy fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpanjifa ary manampy ny orinasa hahatratra ny ampahany tena ilaina amin'ny MICE: ny fanaparitahana ny fahalalana sy ny fanao matihanina ary singa iray lehibe amin'ny fananganana fahatakarana sy fifandraisana bebe kokoa eo amin'ireo matihanina.
Ny programa New Agenda dia natsangana manodidina ny singa telo lehibe:
1. Mpivory fihaonana tokana manompo amin'ny maha-loharanom-pahalalana tokana sy an-tserasera fifandraisana ho an'ny end-to-end fitantanana hetsika, manome antoka ny fifandraisana tsy misy tohiny, ny drafitra ary ny fanatanterahana.
2. Fomba famaritana ny fananganana ekipa notarihin'ny manampahaizana manokana momba ny fananganana ekipa ao Centara ary niara-niasa tamin'ireo matihanina tao Azia Fahaizana, hamolavola teknika fananganana ekipa vaovao mahomby sy hetsika manome hery.
3. Fikolokoloana famoronana hanamafisana ny fifamatorana ary manamafy ny fandraisan'anjaran'ireo mpandray anjara, miaraka amina hevitra vaovao novelomina avy amin'ny ekipa manan-talenta Food & Beverage an'ny Centara toy ny foto-kevitra 'fisakafoanana amin'ny maizina' amin'ny alàlan'ny fananana mpandihy Thai hiditra amin'ny làlana tsirairay miaraka amin'ny labozia LED manjavozavo eny an-tànana na miaraka amin'ny fehimaso izay omena hamoronana sensory farany traikefa ho an'ny vahiny rehetra.
New Agenda dia navadika tsikelikely ho an'ny totalin'ny 25 fananana Centara niasa tamin'ny 1st March 2019.
Mety hosoka ny visa mpizahatany any Kambodza
Fanangonana Autograph avy amin'i Marriott International no manendry ny GM